Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaan naannoo Tigraay irraa kan hafe guutuu biyyattii keessattu akka gaggeeffamu Komishiniin Poolisii Federaalaa beeksisee jira.
Komishiinichi har’a kenneen, naannoolee rakkoon nageenyaa itti mul'achaa ture: Beenishaangul Gumuz , Wallagga Liixaa fi naannawaa birootti filannoon karaa nagaan akka gaggeeffamuuf hojjetamaa jira, jedha.
Gama biraatiin rakkoo Kaaba biyattii muudate irratti kanneen hirmaatan namoonni 72 fi yakka ajjechaa Maayikadiraa irratti raawwatame irratti kanneen kallattiin hirmaatan namoonni 37 guyyaa kaleessa mana hidhaatti dabarfaman, jedhee jira.
Lammiwwan Itoophiyaa Biyyaa Alaa Jiraatan Filannoo Baranaa Irratti Hin Hirmaatan
Boordiin Filannoo Itiyoophiyaa, mirgi filannoo irratti sagalee kennuu lammiwwan Itiyoophiyaa biyyoota alaa jiraatanii, seera biyyattiin eyyamamaa taheyyuu, filannoo dhufaa jiru kana irratti kan hojii irra hin oolfamne tahuu beeksise.
Dubbi-himtuun Boordichaa, Soaliyaanaa Shimallis, VOAf ibsa kennaniin, heerri Itiyoophiyaa lammiwwan biyyoota alaa jiraatan mirga sagalee kennuu akka qaban kan eyyamu tahus, toftaan ittiin hojii irra oolchan haga ammaatti waan lafa kaa’ame hin jiru – jechuu isaanii, Masfin Araagee gabaasera.
10. Human Right Watch Du’aatii Lammilee Itiyoophiyaa Yemenitti Raawwateef Humnoota Hutii itti Gaafatamuu Qabu Jedhe